10 Dib-u-soo-noole hal abuur leh: Tusaalooyin la soo Dejin karo | Abuurista khadka tooska ah
10 Dib-u-soo-nooleynta hal-abuurka ah: Tusaalooyinka la soo bixi karo
Manhajku waa dukumenti aad u shaqsiyeed, gaar ahaanna haddii shaqadeena lagu qaabeeyey gudaha fanka, waa inay lahaataa naqshad u gaar ah oo aan la wareejin karin, annaga ayaa abuurnay oo keligeena inoo ah. Uguyaraan tani waa ra’yigeyga. Weli, waxaan helay xoogaa ilo web ah oo aad u xiiso badan. Kuwani waa arrimo dib-u-cusbooneysiin ah oo dib-u-dhis ah oo naga caawin kara inaan ka tarjunno qaabkeenna, hamigeenna ama awooddeena. Waxaan kugula talin lahaa hadaad isticmaasho midkoodna, inaad isticmaasho aasaas u ah qaabeyntaada. Kudar faahfaahinta shaqsiga, shaabaddiina ha la ogaado. Tani waxay ka dhigi doontaa dukumenti aad u ansax ah oo hufan.
Maskaxda ku hay in aqoonsigaaga iyo qaabkaaga loo gaarsiin karo dhammaan meelaha aad tixgeliso (CV asalka ah, websaydh, manhajka fiidiyowga, qalinleyda, CD-yada iyo DVD-yada, istiikarada, fayl, kaararka ganacsiga ...) waxaadna had iyo jeer heli kartaa hab lagu arko, oo aad ku muujiso xirfadaha kaliya waxaad u baahan tahay inaad adeegsato male-awaalkaaga.
Halkan waxaa ah xulasho ay kujiraan xulashooyin kaladuwan. Noocyada dib u cusboonaysiinta ee la soo dejin karo oo wax laga beddeli karo (lacag la'aan iyo bilaash), xirmooyin ay ka mid yihiin arrimo dib u bilow ah, istiikarada iyo sumadaha (premium). Sikastaba, hadaad rabto inaad booqato waxyaabo kale oo badan waad booqan kartaa bog aad u xiiso badan, (naqshadaha badankood halkaas ayaa laga qaadaa). Go'aansashada hal naqshad ama mid kale waxay ku xirnaan doontaa xirfaddeenna iyo hal-abuurkeenna "geesinimada" (haddii aad daalacato Sawirqaade Waad ogaan doontaa waxa aan ka hadlayo, waxaa jira nashqado aad u dhiirran).
1. Blunde Manhajka waxbarashada
2. Xirmada Manhajka 01
3. Qaabka Retro
4. Ugu Yar iyo Qaabilaada Style Stume Resume
5. Gatefold ayaa soo koobaya
6. Resume xirfad leh
7. Pixeden (bilaash)
8. Nadiif & Hal abuur (bilaash)
9. Resume hal abuur leh
10. Resume weyn
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » 10 Dib-u-soo-nooleynta hal-abuurka ah: Tusaalooyinka la soo bixi karo
Waad ku mahadsan tahay wax ku biirinta, mid ayaan uga soo dejistay CV-ga. Salaan
Jawaab Edwin Jeronimo